Soo Iibso budada Letrozole (112809-51-5) Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Letrozole (Femara) waa daawo loogu talagalay daaweynta haweenka postmenopausal ee qaba hormoon qabta kansarka hore ee kansarka naaska ama lagu daaweeyay tamoxifen (Nolvadex). Dhibaatooyinka kale, isdhexgalka daroogada, iyo macluumaadka uurka waa in dib loo eego ka hor intaadan qaadan dawadan.
Qalabka Root Letrrozole (112809-51-5) video
Nooca Root Latrozole (112809-51-5) Sharaxaad
Kalluunka laydinka Letrrozole waa unugyo aan saliid lahayn oo aan lahayn stomoidal inhibitor, magaca caanka ah waa Femara. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kansarka naasaha qaarkood (sida kansarka naasaha hormoonka naas-nuujinta) ee dumarka ka dib dhalmada. Kalluunka laydinka Letrozole ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si looga caawiyo ka hortagga kansarka inuu soo noqdo. Kansarka naasaha qaarkood ayaa loo sameeyaa si ay u koraan si dhakhso ah hormoon dabiici ah oo loo yaqaan estrogen. Kalluunka laydinka Letrozole wuxuu yareeyaa qiyaasta estrogen ee jidhku sameeyo oo wuxuu ka caawiyaa in uu hoos u dhaco ama dib ugu noqdo koritaanka kansarka naasaha.
Estrogens waxaa soo saaray isbedelka asrogens iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa enzyme aromaticase. Qalabka beeraha ee Letrozole soo saarka estrogens ee sidan oo kale ah tartan, loona ciribtiri karo cirifka qaybta P450 ee cytochrome. Ficilku waa mid gaar ah, iyo budada Raw Letrozole ma yareeyo wax soo saarka macdanta macdanta ah ama corticosteroids. Taa bedelkeeda, ficilka antiestrogenic ee tamoxifen, daaweynta weyn ee daaweynta ka hor inta aan la keenin aromatase xannibaadayaasha, waxay sabab u tahay inay faragalin ku sameyso qiyaasta estrogen, halkii laga saari lahaa wax soo saarka estrogen.
Kalluunka la yareeyey ee Letrozole ayaa muujiyay in ay yareeyaan heerarka estrogen by 98 boqolkiiba iyada oo kor u qaadeysa heerarka testosterone. Qalabka ka hortagga hormoonnada ee Raven Letrozole ayaa doorbidaya ciyaartoyda iyo jir-dhisayaasha si loo isticmaalo xilliga wareegga steroid si loo yareeyo xanaaqa sababtoo ah biyo-qabashada xad-dhaafka ah iyo ka hortagga abuurista unugyada naaska naaska ku jira ee ginecomastia oo ah saameyn dhinaca qaar ka mid ah steroids.
Dareeraha Root Latrozole (112809-51-5) Smamnuucista
Product Name Root Latrozole ah
Magaca Kiimikada Femara; , 4 '- ((1h-1,2,4-triazol-1-yl) methylene) dibenzonitrile; Waa lataliyaha
Molecular Wsideed 285.31 g / mol
barafku Psaliid 184-185 ° C
Biological Life-Life 2 maalmood
Color Inta udhaxeysa ama ka baxsan-budada
milmi Biyaha Solubility 0.0799 mg / mL
kaydinta Temperature -20 ° C Talaajo
Application 1. loo isticmaalo in lagu daweeyo noocyada kansarka naasaha qaarkood (sida kansarka naasaha hormoonka naasaha ee hormoonka naasaha) ee dumarka ka dib dhalmada.
2. dhiska jirka
Waa maxay budada Raven Letrozole (112809-51-5)?
Letrozole waxa loo isticmaalaa in lagu daweeyo noocyada kansarka naasaha (sida hormoon-naas-nuujin naas-nuujin ah) dumarka ka dib dhalmo-dayska. Letrozole ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si looga hortago kansarka ka soo laabashada. Kansarka naasaha qaarkood ayaa loo sameeyaa si ay u koraan si dhakhso ah hormoon dabiici ah oo loo yaqaan estrogen. Letrozole wuxuu yareeyaa qiyaasta estrogen ee jidhku sameeyo oo wuxuu ka caawiyaa in uu hoos u dhigo ama uu ku noqdo gogosha kansarka naasaha.
Kalluunka laydinka Letrozole (112809-51-5) wuxuu shaqeeyaa
Letrozole wuxuu hoos u dhigaa heerarka haweenka hormoonka haweenka ee hoormoonka haweenka. Estrogen wuxuu kiciyaa kansarka naasaha si uu u koro. Kansarka naasaha waxa la yiraahdaa hormoonka xasaasiyadda ama hormoonka xasaasiyadeed ee hormoonka. Letrozole waxay joojin kartaa ama yareeyn kartaa koritaanka kansarradan.
Letrozole wuxuu kaliya ka shaqeeyaa haweenka uurka leh.
Kadib markaad joojiso, dumarku ma soo saaraan estrogen-ka ugxan-yari. Laakiin waxay weli soo saaraan qadar yar iyaga oo isticmaalaya enzim la yiraahdo aromatase oo soo jiidata hormoonada kale ee loo yaqaan 'androgens' oo loo yaqaan 'estrogen'. Isbeddelkan ayaa inta badan ku dhaca unugyada dufan, muruq iyo maqaarka. Letrozole waa nooca daroogada loo yaqaan 'aromatase inhibitor'. Waxay ka hortagtaa aromatase si aysan u beddeli karin asrogens oo loo yaqaan 'estrogen'.
Qiyaasta lagu taliyey ee Femara waa hal kiniini 2.5 mg kiniin ah maalin walba, iyada oo aan loo eegin cuntada.
Dareeraha Root Latrozole (112809-51-5) faa'iidooyinka
Laba baaritaan oo waaweyn ayaa muujiyay faa'iidooyinka Femara.
Dumarka caalamiga ah ee BIG 1-98, ayaa bilaabay 1998, marka la barbar dhigo Femara ilaa tamoxifen ka dib qalliinka ka dib haweenka postmenopausal oo lagu garto kansarka naasaha-hormarka, hormarka hore ee naasaha. Natiijooyinka waxay muujiyeen in Femara ay ka fiicnayd tamoxifen:
Daraasada MA-17, oo lagu qabtay Canada, waxay eegtay in Femara ay u qaadato 5 sanado ka dib marka la qaato tamoxifen sanadaha 5 (guud ahaan sanadaha 10 ee daaweynta hormoonnada) waxay hoos u dhigi kartaa halista kansarka soo noqda ee dumarka postmenopausal ee lagu sheegay hormoonka -Ka-daweenta-hormarka, kansarka naasaha hore. Natiijooyinka ayaa muujiyay in Femara:
* In la yareeyo khatarta kansarka soo noqda
* In la yareeyo halista kansarka ku faafa qayb kale oo jirka ah
marka la barbardhigo inaanan qaadan Femara ka dib sanadaha 5 ee tamoxifen.
Soo iibso budada Letrozole laga bilaabo Buyaas.com